क्षयरोग परीक्षणका लागि गुल्मीमा अत्याधुनिक ‘जीन एक्स्पर्ट’ – Gulminews
Home/प्रविधी/क्षयरोग परीक्षणका लागि गुल्मीमा अत्याधुनिक ‘जीन एक्स्पर्ट’
क्षयरोग परीक्षणका लागि गुल्मीमा अत्याधुनिक ‘जीन एक्स्पर्ट’
यो मेशिनबाट क्षयरोगका साथै इवोला, एचआईभी, हेपाटाइटीस बी जस्ता १५ थरीका रोगको परीक्षण गर्न सकिन्छ ।
गुल्मीन्युज Follow on Twitter Send an email २०७४ श्रावण २६, बिहीबार १५:०६ मा प्रकाशित
गुल्मी । क्षयरोग परीक्षणका लागि जिल्ला अस्पताल गुल्मीमा ‘जीन एक्स्पर्ट’ मेशिन सन्चालन हुने भएको छ । खकारमा हुने जीवाणु परीक्षणका लागि विश्वकै पछिल्लो नयाँ प्रविधि भित्र्याउन लागिएको हो ।
हाल अस्पतालमा सञ्चालित प्रयोगशालाभन्दा यो मेशिन धेरै उपयोगी हुने चिकित्सकहरूले बताए । फोक्सो र त्योभन्दा बाहिर देखिने क्षयरोग परीक्षणमा अहिले ५ प्रतिशत मात्र सफल हुने गरेकोले अब करीब ९८ प्रतिशत सफल परीक्षण हुने जिल्ला स्वास्थ्य कार्यालयले जानकारी दिएको छ ।
निक साइमन इन्ष्टिच्यूटको समन्वय र विराट नेपाल मेडिकल ट्रष्टको सहयोगमा मेशिन सञ्चालनमा आएको हो । ‘यो मेशिनबाट क्षयरोगका साथै इवोला, एचआईभी, हेपाटाइटीस बी जस्ता १५ थरीका रोगको परीक्षण गर्न सकिन्छ । यसका लागि फरकफरक कार्टिज आवश्यक हुन्छ,’ निक साइमनका डा. काशिम शाले भने, ‘अहिले हामीसँग क्षयरोग परीक्षणको कार्टिज मात्र छ ।’ आगामी दिनमा सबै १५ थरीका रोगको परीक्षण गर्ने तयारी गरेको उनले बताए ।
गुल्मी सहित कपिलवस्तु, प्युठान र बर्दियामा यस वर्षदेखि क्षयरोग परीक्षणका लागि मेशिन सञ्चालनमा ल्याउन लागिएको छ । झण्डै एउटा मेशिनको २५ लाख पर्ने, चारओटा मेशिन र प्रतिकाट्र्रिज १० डलर पर्ने २ हजार थान काट्र्रिज सहयोग प्राप्त भएको डा. शाले जानकारी दिए ।
भियतनामका डा. म्याक्सको पहलमा चार जिल्लामा क्षयरोग परीक्षणका लागि अत्याधुनिक मेशिन ल्याइएको उनले बताए । मेशिन भित्रिएसँगै क्षयरोग परीक्षणका लागि बाहिरी जिल्ला जानुपर्ने बाध्यता हट्ने छ ।